May Nyane: မြို့သူ
တခါတလေ.. အင်တာနတ်သုံးပြီး စမ်းချောင်းထဲ ရေစိမ်ချင်သော ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်မချရဲ
i always want to live inarural town and also wish to have cheap high speed internet access :)
တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖူးသည်။ တမျှော်တခေါ် ကျယ်ဝန်းသော လယ်ကွင်းမှာ လယ်ထွန်စက်ကြီးမောင်းလို့၊ အိမ်ပြန်လာတော့ အိမ်လေးက ချစ်စရာ သစ်လုံးအိမ်လေး။ အနီးအနားက စမ်းချောင်းလေးကရေကို သဘာဝအတိုင်း အိမ်အထိရောင်အောင် စီးဆင်းထားစေသည်။ ညဘက်မှာ အိမ်ကလေးက နေရောင်ချည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်မီးရောင်တွေနဲ့ အတော်အသင့်လင်းလို့။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် IPStar Broadband လေးနှင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကလဲ ရှိရဦးမည်။ မြို့ပြနည်းပညာများ ကျေးလက်ကို ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ အစ်မရေ။
I really love this story. I am totally same with ur Idea. I hate big city lifestyle and man-made smile , even I have to make.